TALATA 20 MARTSA 2018
GAZETY INO VAOVAO TOAMASINA : Feno iray taona katroka ilay gazetim-paritra voalohany
Tao anatin’izay herintaona izay, maro ny zavatra nosedraina, indrindra teo amin’ny fanantontosan’ny mpanao gazety ny asany. Asa masina tokoa no iantsorohan’ny mpanao gazety, hany ka, tsikera hatrany no asetrin’ny olona rehefa maha-tsiaro voatsindrona amin’ilay lahatsoratra avoaka. 8 juin 2010
Feno iray taona tokoa ny gazety “Ino vaovao Toamasina”, ilay gazetim-paritra mpiseho isan’andro voalohany eto Madagasikara.
Tao anatin’izay herintaona izay, maro ny zavatra nosedraina, indrindra teo amin’ny fanantontosan’ny mpanao gazety ny asany. Asa masina tokoa no iantsorohan’ny mpanao gazety, hany ka, tsikera hatrany no asetrin’ny olona rehefa maha-tsiaro voatsindrona amin’ilay lahatsoratra avoaka.
Ankilany indray, lazaina ho mpanafosafo ny mpitondra, na miandany aminy ny mpanao gazety, rehefa mba mamoaka ny asa nataony mamaly ny tombotsoam-bahoaka. Na izany na tsy izany, tsy kivy izahay eto amin’ny “Ino-vaovao Toamasina”, manolotra ireo trangan-javatra miseho isan’andro, satria, izay liam-baovao no liam-pandrosoana.
Tsy hipasoka ny efa malama izahay raha hiteny androany, fa dia : mpanao gazety tsara hofana sy matotra, ary manana traikefa no miasa amin’ity gazety ity, ka azo antoka tanteraka ny fakana ny loharanom-baovao marim-pototra sy voahadihady lalim-paka. Fehiny, vaovao marim-pototra, tsy miandany amin’ ny atsy na ny eroa no atosaka ho anareo mpamaky.
Anisan’ny nanamarika sy nahafantaran’ny maro ity gazety ity, dia ny vidiny izay natao “0 Ariary na Bôjo”, izany hoe, tsy vidiam-bola fa zaraina maimaim-poana, nanomboka ny fiandohan’ny volana Martsa 2010. Maro ny mametra-panon- taniana ny amin’izany, ka hitondrana fanazavana fohy eto androany.
Mba ho fanomezana ny fahafaham-pon’ny olona, haharaka tsy tapaka ny vaovao no nahatonga ny tompon’andraikitra foibe nanao ny sarany ho “0 Ariary”. Eto am-pamaranana : mankasitraka feno ho anareo mpamaky tsy mahafoy an’ity gazety ity izahay mpiara-miasa rehetra, ary mirary ny hatratrarantsika ny tsingerintaona vaovao manaraka.
Tsy havela handalo ihany anefa ity tsingerin-taona voalohany ity, fa dia hametraka fahatsiarovana ho anareo mpamaky, amin’ny alalan’ny fanomezana anareo ireo sarin’ny mpiara-miasa rehetra, mitoto ka mahafotsy ny asa isan’andro.
Fanakatonana Tanteraka ny Sekoly Katolika Saint Joseph Fille Toamasina
2014-04-09 10:36:51 par FIDISON Parfait
Tranga mampalahelo ary tsy mbola niseho tamin’ny tantaran’ny Eglizy Katolika taty aoriana izany hoe Lehiben’ny Fiangonana Katolika , sahy manakatona Sekoly Katolika ary manolotra an’izany ho an’ny fikambanana mba hatao Birao. Tsy iza io sekoly akatona ary efa nambara Ofisialy ny fanambarana fa hakatona ny volana Aout izao ny sekoly Saint Joseph Fille izay vao avy nankalaza ny faha 150taona nanabeazany ny zanaka Kristianina malagasy ary reharehan’ny Vahoaka Kristianina Katolika ary ny firenena mihintsy aza. Zavatra mahamenatra ary tsy tokony atao resaka akory ary tsy tokony handalo an’eritreritra akory izany hanakatona sekoly fanabeazana ankizy ho kristianina handimby sy hanondrotra avo ny finoana Katolika eran’izao Tontolo izao. Koa manentana anareo rehetra izay mahatsapa tena fa manana adidy ho an’ny fiangonana ary ho an’izay efa apostolin’ny Jesoa, sahia ary mijoroa !
GAZETY INO VAOVAO TOAMASINA
2014-04-29 07:46:38 par carradine
Mba hanontany azafady, azo atao ve raha mpianatra manao demande d’information na demande de stage hanaovana thème de licence en communication ao amin’ny ino vaovao toamasina ?
Nahazo fandrahonana ny orinasa mpanamboatra lalana any Ambilobe MARARY FO NY HVM (561) 15 mars 2018 Noroahina hivoaka ny lapa ny mpanao gazety, raikitra ny ady saritaka FANDINIHANA LALAM-PIFIDIANANA TENY TSIMBAZAZA (366) 14 mars 2018 Mangataka fialan-tsiny ampahibemaso ny Holafitra FANAMBANIANA MPANAO GAZETY (344) 15 mars 2018 “Hampidinina ho amin’ny antsasany ny vidin-jiro” ANDRY RAJOELINA SY NY IEM (283) 13 mars 2018 Ramatoa iray maty, tovovavy efatra lasa natao takalon’aina FANAFIHAN-DAHALO TAO MAHABO (255) 15 mars 2018 Nolanian’ny malaso tamin’ny lehiben’ny andrimasom-pokonolona ny bala VALY FATY (251) 13 mars 2018